समानान्तर Samanantar: August 2014
विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला असफल राजनीतिकर्मी तर सफल राजनेता हुन्। उनको राजनीतिक व्यक्तित्वमा यी दुवै पक्षको उत्तिकै महत्व देखिन्छ तर राजनेताका रूपमा बीपी अहिले झन् विवादरहित र आकर्षक बन्दैगएका छन्।
राजनेतामा सैद्धान्तिक दृढता, नैतिक भावना, दूरदृष्टि र निश्चित ध्येय तथा त्यसको प्राप्तिका लागि सहमति जुटाउने क्षमता तथा कौशल अनि बृहत्तर हितका लागि स्वार्थ त्यागजस्ता गुण हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। लोकतन्त्रप्रतिको सैद्धान्तिक प्रतिबद्धतामा बीपी कहिल्यै विचलित भएनन्। विसं २०१५ सालको निर्वाचनपछि संसारभर ‘जनहितकारी अधिनायक’हरूको उदय भएको थियो। विश्वका उनका समकालीन थुपै्र नेता लोकतन्त्रजस्तो ‘सुस्त’ राजनीतिक व्यवस्थाबाट देशको प्रगति हुँदैन भन्ने बहानामा निरंकुश शासक बन्दै गएका थिए। बीपी भने लोकतन्त्रबाट विचलित भएनन्। उनले जीवनको अन्तिम घडीमा समेत ‘लोकतन्त्रका विषयमा सम्झौता नगर्ने’ अडान छाडेनन्।
राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा बीपीको चिन्तनमा ठूलो परिवर्तन भएको देखिन्छ। सशस्त्र आन्दोलन सफल नभएपछि उनमा ठूलै नैतिक र मानसिक दबाब पनि परेको थियो। त्यही क्रममा बीपीले अहिंसाको बाटो लिए। तर, आफूविरुद्ध चलाइएका मुद्दामा भने उनले सशस्त्र आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको नैतिक जिम्मेवारी पनि लिए। उनले लिएको नैतिक जिम्मेवारीलाई राजाले साबिती वयानका रूपमा प्रचार गरेर मृत्युदण्ड दिनसक्ने जोखिम कानुनका विद्यार्थी बीपीले पक्कै बुझेका थिए। तै पनि बीपी नैतिक दायित्व स्वीकार गर्नबाट विचलित भएनन्।
शीतयुद्धको समाप्ति त्यति छिटै र सजिलै होला भन्ने बीपीले पनि ठानेका थिएनन् होला। तर, राष्ट्रियता संकटमा छ र त्यसलाई जोगाउन देशमा लोकतन्त्र आवश्यक छ भन्ने मान्यतामा उनी दृढ रहे। त्यसक्रममा उनले आफूलाई ‘एक्लो बृहस्पति’सम्म भनेका थिए। हुन पनि सत्तालाई गौण ठानेर लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गर्दा धेरैको समर्थन पाउन सकिँदैन थियो। राजनेता भएकैले बीपी सत्ताभन्दा लोकतन्त्र र राष्ट्रलाई महत्व दिनुपर्छ भन्ने आफ्नो मान्यतामा अडिग रहनसकेका हुन्।
नेपालका ‘रैती’लाई ‘स्वतन्त्र नागरिक’बनाउने ध्येयमा पनि बीपी विचलित भएनन्। बीपीलाई भने २००७—२०४६ को चार दशकमध्ये पञ्चायत कालको तीस वर्ष राज्यले नै ‘अराष्ट्रिय’ बनाउने प्रयास गरिरह्यो। त्यति बेला हुर्केका धेरैले बीपीलाई ‘देशबेचुवा’, ‘भारतीय दलाल’ भनेर पढे। केहीले त्यस्तै ठाने पनि। राजाका पञ्च र कम्युनिस्टहरू बीपीलाई एकै स्वरले ‘अराष्ट्रियतत्व’ भन्थे। अहिले यी दुवैथरी बीपीको राष्ट्रियतासम्बन्धी धारणाका प्रबल समर्थक भएका छन्। उनका प्रखर विरोधीसमेत बीपीको लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको अन्योन्याश्रित सम्बन्धसम्बन्धी व्याख्यामा सहमत हुनुपर्योर। बीपीले २०३३ सालमा स्वदेश फर्कने बेलामा गरेको अपिलमा उल्लेख गरेको ‘लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध’ सम्बन्धी धारणा यथार्थमा शीतयुद्धकालीन विश्व राजनीतिमा नयाँ सिद्धान्त थियो। सानो मुलुकको सत्तामा नरहेको राजनेताको धारणा संसारका सामु व्याख्यासहित पुग्न सकेन। सन् १९९० को दशकमा पूर्वी युरोपको ‘राष्ट्रियता र लोकतन्त्र’सम्बन्धी जागरणलाई नियाल्ने हो भने बीपीको सैद्धान्तिक सूत्रको महत्व बुझिन्छ। ढुंगामाटोसँग जोडिएको राष्ट्रियतालाई बीपीले जनतासँग जोडेका थिए। बीपीका अनुसार ‘राष्ट्रियताको पहिलो पनि र अन्तिम पनि सर्त हो — प्रजातन्त्र’।
यसरी हेर्दा बीपी दूरदृष्टि, अटल निष्ठा र दृढ संकल्प भएका स्वार्थरहित राजनेता देखिन्छन्। संसारमै उनी बाँचेको कालखण्डमा बीपीसँग दाँजिने राजनेता बिरलै पाइएलान्। नेपालमा २००७ को जनक्रान्तिपछि आधुनिक युगको थालनी भएको हो। त्यस जनक्रान्तिका वास्तविक ‘नायक’ बीपी नेपाली आधुनिकताका उन्नायक पनि हुन्। यसैले समकालीन नेपालमा बीपी सबैभन्दा सम्मानित राजनेता हुन पुगेका हुन्। बीपीप्रति नेपालीले संसारमै गर्व गर्न सक्छन्।
राजनीतिकर्मीका रूपमा भने बीपी सफल भएनन्। उनी २००७ सालको क्रान्तिलगत्तै र २०१५ सालको संसदीय निर्वाचनपछि सत्तामा गए। पहिलोपटक त्यति बेलाका शक्तिहरू भारत र राजा दुवै चिडिए। तिनैका गोटीको चक्रव्युहमा बीपी ‘अभिमन्यु' भए। दोस्रो पटक पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति तथा तिनको स्वार्थसँग सम्झौता गर्न नसक्ता बीपी सत्ता च्युत भए। सशस्त्र आन्दोलन छाडेर निर्वासनबाट फर्कने बेलामा राजनीतिक चातुर्य देखाएर राजासँग सम्झौता गरेका भए वा इन्दिरा गान्धीसँग सम्झौताका लागि तयार भएका वीपी विमानस्थलबाट सोझै सुन्दरीजल पुर्याकइने थिएनन्। भारतको आड लिएर फर्केका भए बीपीले राजालाई ‘मेलमिलाप’का लागि आग्रह गर्नुपर्ने थिएन। बरु, उनले सत्ता साझेदारीका लागि धम्की दिनसक्थे। पुष्पकमल दाहाललाई लिन २०६३ को जनआन्दोलनपछि तत्कालीन गृहमन्त्री आफैँ हेलिकप्टर लिएर गएको सम्झने हो भने भारत र दरबारमध्ये कुनै एउटाको आड र अझ यी दुवैको भर पाएको भए सत्ता सजिलै हासिल हुन्थ्यो। तर, बीपीले त यी दुवैलाई चिडाए। उनलाई राजनीतिकरूपमा सफल कसरी भन्नु?
चाणक्यदेखि मेकियावेलीसम्मका पण्डितहरू सत्ताका लागि सम्झौता गर्नु ‘राजनीतिक’ बुद्धिमानी ठान्छन्। ‘साम, दान, दण्ड र भेद’को नीतिमा ‘सत्याग्रह’ पर्दैन। बीपी राजा महेन्द्रसँग मिलेको भए सधैँ सत्तामा रहनसक्थे रे! सेनाको मुखियालाई नटेर्नु सत्ता राजनीतिका दृष्टिबाट राजनीतिक कौशल होइन। राजनीतिक लाभहानिलाई महत्व नदिने उनको स्वभावले २०३६ मा जनमत संग्रह गराउने सरकारमा बहुदल पक्ष सहभागी हुन पाएन। त्यति बेला धेरैले जनमत संग्रहमा हारको प्रमुख कारण सरकारी धाँधलीलाई नै ठहर्यातएका थिए। बीपी स्वयंले पनि पञ्चायतको पक्षमा बहुमत देखिएको जनमत संग्रहको परिणामलाई ‘अप्रत्याशित र अव्याख्येय’ भनेका थिए। सम्भवतः राजनीतिक चतुर्या।इँका दृष्टिले सत्तामा सहभागिता नखोज्नु गल्ती नै हो।
बीपी सशस्त्र संघर्षमा सघाउने इन्दिरा गान्धीको प्रस्ताव अस्वीकार गरेर स्वदेश फर्के। राजाले पत्रे्कर थुने। कालान्तरमा बीपीकै कान्छा भाइ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नयाँ दिल्लीलाई १२ बुँदे सहमतिको थलो र मध्यस्थ बनाए। त्यसो नगरेको भए न माओवादी सजिलै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने थियो न राजतन्त्रै समाप्त हुने थियो। बीपी राष्ट्रियताको चिन्ता गरेर नेपाल फर्कनुभन्दा ‘पर्खेर हेर’को रणनीति अपनाएर भारतमै केही समय अरू बसेका भए पक्कै विमानस्थलबाटै जेलमा जानुपर्ने थिए। संकटकालको अन्त्यपछि इन्दिरा गान्धी चुनावमा हारिन् र बीपीका शुभचिन्तकहरू सत्तामा आए।
बीपीमा लोकतन्त्रका लागि पश्चिमा मुलुकले सहयोग गर्छन् भन्ने भ्रम पनि रहेको देखिन्छ। व्यापारी पश्चिमको वास्तविक प्राथमिकता लोकतन्त्र हुँदैन भन्ने सत्य उनले बुझेनन्। रुसी खेमा त यसै पनि बीपीको पक्षमा हुने कुरै थिएन। उनले अफगानिस्तानको रुसी आधिपत्यलाई दक्षिण एसियालाई अस्थिर बनाउने ठूलो कारणका रूपमा चित्र गर्ने गरेका थिए। रुस त बीपी ‘राष्ट्रिय मेलमिलाप’को नीति लिएर नेपाल फर्केकोमा पनि खुसी थिएन। बीपी नेपाल फर्केपछि राजावादी र रुस—भारत खेमाका भनेर चिनिनेहरू सबै समानरूपमा उद्वेलित भएका थिए। त्यति बेेला ‘चार वरिष्ठको वक्तव्य’का नामले चर्चित एउटा वक्तव्यमा बीपीको स्वदेश आगमनले ल्याएको तरंग देख्न सकिन्छ। टंकप्रसाद आचार्य, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, डिल्लीरमण रेग्मी र डा. केशरजंग रायमाझीले ‘बीपीको आगमनले देशको प्रजातान्त्रीकरणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्छ ’ भन्ने आशय झल्कने वक्तव्य दिएका थिए। बीपीले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको नेपालको राष्ट्रियतामा पर्ने प्रभावको आकलन त गरे तर त्यसलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने प्रयास गरेनन्।
वीपीको राजनीतिक व्यक्तित्वलाई मूलतः ४ चरणमा विभाजित गर्न सकिन्छ। उनको विचार निर्माणमा प्रारम्भिक चरणको क्रान्तिकारी परिवेश महत्वपूर्ण देखिन्छ। सायद, यही चरणले उनलाई आजीवन विद्रोही बनायो। राणा शासनविरुद्ध सशस्त्र जनक्रान्ति २००७ सम्मलाई यही चरणमा राख्न सकिन्छ। त्यसपछि २०१८ सालमा प्रधानमन्त्री पदबाट बर्खास्त नहुँदासम्म बीपी संगठन, विकास र शासनमा केन्द्रित देखिन्छन्। सुन्दरीजलको बसाइ (२०१८—२५) देखि भारत निर्वासन र सशस्त्र आन्दोलन अवधि बीपीको वैचारिक परिपक्वताको चरण हो। तर, उनको चिन्तनमा यी सबै चरणभन्दा महत्वपूर्ण परिवर्तन २०३३ पछि देखिएको छ।
सायद, चतुर राजनीतिकर्मी भएको भए बीपीले सत्ताका लागि सम्झौताका उपाय अपनाउने थिए। राजनीतिक चतुर्यावइँको अभावले उनलाई राजनीति नुबझ्ने राजनेता बनायो। राष्ट्रियता र लोकतन्त्रप्रतिको चरम अनुराग तथा मानवतावादी दृष्टिकोणले उनी सबैभन्दा प्रभावशाली र सम्मानित राजनेता त भए तर सत्ता राजनीतिमा सफल भएनन्। ‘राष्ट्रिय मेलमिलाप’को नीति लिएर २०३३ मा निर्वासनबाट फर्केका बीपी त्यसपछि नै यथार्थमा ‘राजनेता’का रूपमा प्रकट भएका हुन्। अर्थात्, विदेशमा बस्ने र हतियार उठाउने नीति छाडेर नेपालमै बसेर अहिंसात्मक मार्ग अवलम्बन गर्ने उनको नीतिले राष्ट्रिय समर्थन पायो। यिनै नीतिका कारण विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला राजनेता भए।
Posted by Govinda at 8/25/2014 10:09:00 AM No comments:
िवसं २०५० को बाढीपछि उद्धार र पुनःस्थापना कार्यमा समाज कल्याण परिषद्को भूमिका लगभग केन्द्रमा थियो। ठूला भौतिक संरचनाकाे पुनःनिर्माणबाहेकका सबैजसो काममा परिषद्ले समन्वय गरेको थियो। परिषद्को कार्यकारी निर्देशकका रूपमा र रुचिको विषय पनि भएकाले म बढी नै संलग्न भएको थिएँ। सदस्य सचिव कृष्ण खनालले बीचैमा राजीनामा गरेकाले पनि मलाई बढी संलग्न हुन कर लागेको थियो।
१ बाढी गएको भोलिपल्टै नेपाल रेडक्रसलगायतको सहभागितामा परिषद् मा डेस्क बनाएर उद्धार सामग्री संकलन र वितरणको व्यवस्था सुरु गरिएको थियो।
२ स्वास्थ्य मन्त्रालयले बाढी पीडित क्षेत्रमा औषधिसहित िचकित्सक तैनाथ गरेको थियो। सफा खाने पानीका लागि प्लास्टिकको ट्यंाकी वितरण गरिएको थियो ।
३ अन्तर्राष्ट्रिय गैससको बैठक बोलाएर पुनः निर्माणमा सहयोग जुटाउन आग्रह गरिएको थियो।
४ विश्व खाद्य कार्यक्रम र युनिसेफको सहयोग परिषद्को पौष्टिक आहार कार्यक्रममार्फत् चिनी दूध चामल पीठो ३ महिनासम्म वितरण गरिएको थियो।
५ थुप्रैवटा क्षतिग्रस्त विद्यालयको मर्मत र नवनिर्माण विभिन्न INGOs को सहयोगमा परिषद्को समन्वयमा गरिएको थियो।
६ बाढीबाट विस्थापितका लागि ताइवानकाे बौद्ध संस्थाको सहयोगमा १८०० वटा पक्की घर बनाइएको थियो ।
उद्धार कार्य चल्दै गर्दा स्थलगत निरीक्षणका लागि गएका मिसनरी अफ च्यारिटीका सिस्टरहरूले िवहार र बंगालमा यसरी व्यवस्थितरूपमा उद्धार र पुनःस्थापना कार्य भएको कहिल्यै नदेखेको भनेर सराहना गरेका थिए। खासगरी बाढीपछि कुनै पनि रोग नफैलेकोमा उनीहरू आश्चर्यचकित भएका थिए ।
योजना आयोग स्वास्थ्य मन्त्रालय सुकुम्वासी आयोगसँग निकै निकट समन्वयमा काम भएको थियो। तर सबैभन्दा ठूलो बल चाहिँ प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको रुचि र समर्थन भएको थियो।
Posted by Govinda at 8/20/2014 10:45:00 AM No comments:
अहिलेको समयलाई सुहाउने गरी प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पार्टी र सरकार हाँक्नसकेको देखिएको छैन। यसैले तीव्र परिवर्तन र प्रगतिको अपेक्षा गर्ने जनमत बिस्तारै कोइरालाबाट निराश हुँदैगएको छ। यस्तो अवस्था जति लम्मिन्छ देश, कांग्रेस र कोइराला सबैलाई उति नै नोक्सान हुन्छ। तर, सुशील कोइरालाले पद त्याग गर्दैमा समस्या समाधान हुने पनि देखिँदैन।
कांग्रेसलाई पन्छाएर सरकार त जेनतेन चल्ला तर संविधान बन्दैन। यसैले संविधान नबन्दासम्म सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले नै गर्नुपर्छ। कोइरालाको सहमतिबिना कांग्रेसकै अर्को नेता प्रधानमन्त्री बने स्थिति झन् बिग्रनसक्छ। किसुनजीलाई हटाएर २०५६ सालमा गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री भएकै दिन पार्टी विभाजन र लोकतन्त्र हरणको बीउ रोपिएको थियो। सुशील कोइरालाले प्रभावकारीरूपमा नेतृत्व गर्न नसक्ने, कांग्रेसको अर्को कुनै नेताबाट पनि समस्या समाधान नहुने र कांग्रेसबिना पनि संविधान बन्न नसक्ने जटिल अवस्थामा देश फसेको छ। यसबाट उम्कन कांग्रेस पार्टीले गति लिनसक्नुपर्छ। पार्टी गतिशील हुने उपाय के हुनसक्छ त? नेपाली कांग्रेसको विनिर्माण। अर्थात्, नयाँ स्वरूपको 'कामराज योजना’।
के हो कामराज योजना?
भारतको राजनीतिबारे रुचि राख्ने धेरैले अखिल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका नेता के. कामराजको चर्चा सुनेकैे हुनुपर्छ। कम्तीमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा पुगेका ६० वर्ष नाघेका नेताले त पक्कै पनि कामराज योजनाका बारेमा थाहा पाएका होलान्। ( थाहा नपाउनेले गुगल गरे हुन्छ।) सन् १९६२ को उपनिर्वाचनमा डा. राममनोहर लोहिया लगायतका प्रखर कांग्रेसविरोधीहरू विजयी भए। लगातार ३ पटक संसदीय निर्वाचन जितेको र प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलगायत उनै नेताले नेतृत्व गरेको भारतीय कांग्रेसप्रति जनतामा असन्तोष बढ्दै गएको संकेत थियो त्यो। कामराजले सन् १९६३ वरिष्ठ नेताहरू सत्ता छाडेर पार्टीको काममा जाने र नयाँ पुस्तालाई सरकारमा पठाउने योजना बनाए। उनको युक्तिले भारतीय कांग्रेसलाई नयाँ जीवन दियो। जनतामा संगठन र सरकारको छविमा सुधार गर्योउ भने कार्यकर्तामा पनि उत्साह र आत्मविश्वास बढायो। इन्साइक्लोपेडिया ब्रिटानिकाले 'कामराज प्लान’लाई सजिलोसँग बुझिने गरेर लेखेको छ — ' कांग्रेस पार्टीलाई जनस्तरमा पुनःस्थापित गर्ने कार्यमा संलग्न हुनका लागि उच्च तहका केन्द्रीय तथा राज्य स्तरका पदाधिकारीको स्वेच्छिक पदत्याग।’ यो ५० वर्ष पहिलेको भारतमा अपनाइएको उपाय थियो। अहिले नेपाली कांग्रेसलाई गति दिन पनि कामराज योजनाजस्तै तर देश, काल र परिस्थिति सापेक्ष उपाय आवश्यक छ।
सुशील कोइरालाले अत्यन्त जटिल समयमा मुलुकको नेतृत्व गर्नुपरेको छ। नियतिले उनलाई इतिहास बनाउने अवसर र जिम्मेवारी दिएको छ। लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको नेतृत्व गरेर मुलुकलाई अस्थिरताको भुमरीबाट पार लगाउने जिम्मा इतिहासले उनलाई दिएको छ भने पार्टीलाई पनि युगअनुसारको आधुनिक र सक्षम नेतृत्वको जिम्मा उनले लगाउनु छ। लोकतन्त्र र राष्ट्रियता कमजोर हुन नदिन कांग्रेस पनि सुदृढ र युगसापेक्ष हुनुपर्छ। अहिले जसरी नियतिले डोर्या्एको बाटामा हिँडिदिएरमात्र कांग्रेसले समयको गति पछ्याउन सत्तै्कन। नेपाली समाजमा आएको आमूल परिवर्तन आत्मसात् गर्न र जनसाधारणसँग सम्बन्ध जोड्न पनि कांग्रेसले नयाँ केही गर्नैपर्छ। विडम्बना, यति सरल र स्पष्ट यथार्थ बुझ्न र स्वीकार गर्न पनि कांग्रेसका अहिलेका नेता तत्पर र अग्रसर देखिएका छैनन्।
कांग्रेसमा कामराज योजना किन?
स्थायी सत्ताले स्वीकार गरिनसकेको भए पनि नेपालको राजनीति संघीय र समावेशी भइसकेको छ। यसैगरी अब शासन चलाउन बहुमतै आए पनि 'साझेदारी' (कोयलेसन) संस्कार र शैली अपनाउनु पर्छ। शासनमा जनताको स्वामित्व यथार्थमै चरितार्थ हुनेगरी राज्यको पुनःसंरचना अब अपरिहार्य छ तर कांग्रेसका शीर्ष नेता भने मानसिकरूपमा २०४८ सालभन्दा अगाडि बढ्नैसकेका छैनन्। लाग्छ, आजका कांग्रेस र कम्युनिस्ट नेता पञ्चायतको विरोध गर्दागर्दै मानसिकरूपले पञ्चजस्तै एकात्मकवादी अर्थात् 'कमलकोटी' भइसकेका छन्। लोकतन्त्रले सामान्य जनताका छोराहरूलाई प्रधानमन्त्री त बनायो तर उनीहरू लोकतान्त्रिक हुनसकेनन्। तिनले सत्तालाई सिंहदरबारको घेराबाट सत्ता बाहिर उम्काउनै खोजेनन्। गिरिजाप्रसाद कोइराला र पुष्पकमल दाहालले समेत अन्ततः सिंहदरबारको पर्खाल र सम्भ्रान्तको खोपीबाट बाहिर निस्कने चेष्टा गरेनन्। विसं २०४८ सालमा रामशरण महत र महेश आचार्यका नीति अपेक्षाकृत प्रगतिशील थिए। मुलुकलाई अहिलेसम्म त्यति बेलैको गतिले घचेटी रहेको छ। अहिले पनि उनीहरू नै मन्त्री छन्। तिनलाई पुरानै नीति र मान्यता प्रिय लाग्नु अस्वाभाविक होइन। तर, अहिले समय त फेरिइसक्यो। बजारमुखी अर्थतन्त्रका कमजोरी धेरै उजागर भएका छन् भने परम्परागत लोकतन्त्रले जनताको पूर्ण प्रतिनिधित्व गर्न नसकेर समावेशी प्रतिनिधित्वको खोजी भइरहेको छ। सन् १९९० को दशक यता संसारमा भएका आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक प्रगति र परिवर्तन नेपालमा शासन संयन्त्रले आत्मसात् गर्न सकेको छैन। यसैले मुलुकको शासनलाई पनि एक्काइसौं शताब्दीमा पुर्या उन कांग्रेस तयार र अग्रसर हुनुपर्छ। त्यसको उपाय कांग्रेसको विनिर्माण हो। वरिष्ठ नेताहरूले कार्यकारी पद छाडेर स्थानीय तहमै पार्टीको विनिर्माण सुरु गर्नसक्छन्।
सबैभन्दा पहिले लामो समयदेखि सत्तामा रहेका, धेरै पटक मन्त्री भएका वरिष्ठ नेता सरकार छाडेर पार्टीको काममा लाग्नुपर्छ। उनीहरूले कार्यकारी पद छाडे पनि सक्रिय राजनीति छाड्नु पर्दैन। त्यसो भए नयाँ नेतृत्वको विकास पनि हुनपाउँछ भने तिनले अनुभवी नेताको साथ पनि पाइरहन्छन्। संसद्मा निर्वाचित वरिष्ठ नेताले संविधान निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गरे हुन्छ। कांग्रेसमा नयाँ पुस्तालाई अगाडि सार्ने हो भने प्रतिस्पर्धी र सहयोगीहरूको पनि विश्वास लिन सहज हुनेछ।
नेपाली कांग्रेसका ६० वर्षमाथिका विशेषगरी नेपाल विद्यार्थी संघका स्थापना काल एवं त्यसभन्दा पहिलेका नेताले सरकार छाडेर पार्टीमा सक्रिय हुन गाउँ फर्के भने 'कामराज योजना’को नेपाली संस्करण लागु हुनेछ। यो नेकपा (एमाले) को ७० नाघेका नेता कार्यकारी पदमा नबस्ने भनेजस्तो अवकाश लिने निर्णय चाहिँ होइन। एमालेको निर्णय कार्यकर्तामा आधारित कम्युनिस्ट पार्टीमा नेतृत्व हस्तान्तरणको उत्तराधिकार कायम गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित देखिन्छ। कांग्रेस कम्युनिस्ट वा फासिस्ट प्रकारको संगठन हैन। यसैले नियोजित अवकाश आवश्यक छैन। सरकारमा पनि सकेसम्म ३०—४० वर्ष उमेर समूहका नेतालाई पठाएर सांसद्कोे औसत उमेरका अनुपातमा सरकारमा युवा सहभागिता धेरै बनाएमा पार्टीमा नयाँ रक्त सञ्चार हुनेछ। पार्टीलाई सकेसम्म प्रत्येक व्यक्तिसम्म पुर्या उने प्रकारको संरचना र कार्यशैली अपनाउनुपर्छ। पार्टीको संरचना र संगठन विधिमा सुधार नगर्ने हो कांग्रेस बिस्तारै पुस्तैनी पार्टी बन्ने जोखिम बढेको छ। शीर्ष तहका नेताले कार्यकारी पद छाड्ने हो भने त्यसपछि पार्टी विनिर्माणको चरण सुरु हुनसक्छ।
कांग्रेसका नेताहरू मन्त्री पद छाडेर गाउँमा गएर बस्ने हो भने त्यहाँको सामाजिक संास्कृतिक उन्नति हुनसक्छ। गाउँका स्कुल कलेजमा गएर पढाउने हो भने त स्थिति नै अर्को हुन्छ। नयाँ पुस्तासँग प्रत्यक्ष संवाद सुरु हुन्छ। सडकको ढुकढुकी सुन्ने अवसर नेताले पनि पाउँछन्। अहिले ६० नाघेका कांगे्रसका सबै केन्द्रीय नेता आफैँमा इतिहास हुन्। तिनको उपेक्षा कसैले गर्न सक्नेछैन। गाउँमा बसेर जनतालाई सघाउन थाल्ने हो भने जनताको सत्तामा प्रत्यक्ष पहुँच कायम हुनेछ। लोकतन्त्रप्रति जनतामा मोह उत्पन्न हुनेछ। उदाहरणका लागि रामशरण महत आजभन्दा करिब ४५ वर्ष पहिले लमजुङका विद्यालयमा पढाउन पुगेका थिए। त्यति बेलाको ऊर्जा, आनन्द र सन्तोष फेरि पाउन त्यस्तै रचनात्मक र ऊर्जाशील कामको नेतृत्व गर्नुपर्छ। केही नयाँ थालनी गर्नुपर्छ। डा. महतले नुवाकोटको विकासका लागि त्यहीँ बसेर केही गर्ने प्रयास गरे भने त्यहाँको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकरूपमा कायापलट हुनसक्छ। अनि सन्तोष पनि लाग्न सक्छ। राजनीति नै छाड्ने त होइन। आवश्यक भयो र मन लाग्यो भने सत्तामा पुःन फर्के हुन्छ। कामराज योजनाअनुसार राजीनामा गरेका लालबहादुर शास्त्री तुरुन्तै बिनाविभागीय मन्त्री बनाइए। नेहरूको मृत्युपछि शास्त्री प्रधानमन्त्री भए।
कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्वमा रहेका नेताहरू २०४६ पूर्व अवसर नपाएको गनगन धेरै नै गर्थे। यही क्रममा कतिपयले पार्टी छाडेर हिँडेका थिए। आँट नहुने कति जना चुकचुकाएर बस्थे। त्यति बेला अवसरका लागि पञ्चायतमा हामफाल्त उद्यत नेताहरूले २०४६ पछि अवसरै अवसर पाइरहे। राजनीतिमा २०३६ पछि सक्रिय पुस्तामा नेपाल विद्यार्थी संघका संस्थापकमा भन्दा बढी ऊर्जा र नयाँ 'भिजन’ हुनसक्छ। तिनले अवसर पाउन धेरै ढिलो भइसक्यो। नेताहरूले उति बेलाको आफ्नो छटपटी सम्झेर परिवर्तनको ढोका खोल्नु पर्छ। नत्र नेपाली कांग्रेस 'ज्येष्ठ नागरिक क्लब’ बन्नेछ।
Posted by Govinda at 8/18/2014 09:49:00 AM No comments:
Posted by Govinda at 8/11/2014 07:48:00 PM No comments:
Posted by Govinda at 8/08/2014 05:35:00 PM 1 comment:
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘हिमाल, पहाड र तराई’ भने ‘मधेस' भनेनन्। ‘गणतन्त्र' त भने तर ‘धर्मनिरपेक्षता'को उच्चारणै गरेनन् । यसले 'अब नेपालमा प्रदेश विभाजन गर्दा 'ठाडो चिरा' लगाउनुपर्छ र मुलुकलाई 'हिन्दु गणराज्य’ बनाउनुपर्छ भन्ने स्वर पक्कै चर्को हुनेछ । तर यस्तो 'उग्र राष्ट्रवादी' र 'धार्मिक पुनरुत्थानवादी’ आग्रहले ‘विखण्डनवादी' र ‘धार्मिक उपनिवेशवादी'लाई झन् उक्साउनेछ। संघीयताकाे मर्ममा प्रहार गरेर जातीय र क्षेत्रीय साम्प्रदाियकले जस्तै उग्र राष्ट्रवादीले पनि राष्ट्रिय एकताको जरा कमजोर बनाएका छन् । अब ठाडो चिरा पार्ने वा संघीयतामा जान नदिने वा धार्मिक पुनरुत्थानको प्रयास गर्नु नेपाल र नेपालीको हितमा हुनेछैन । मोदीको मन्तव्यको अनर्थ लगाएर देशमा द्वन्द्व चर्काउने कारक नबनौ ।
Posted by Govinda at 8/05/2014 10:40:00 AM No comments:
Posted by Govinda at 8/05/2014 05:37:00 AM No comments:
Posted by Govinda at 8/05/2014 05:30:00 AM No comments: